Bit By Bit - ठूलो सहयोग सिर्जना गर्दै - 5.4.3 निष्कर्ष
वितरित डेटा संग्रह सम्भव छ, र भविष्यमा यो सम्भावित प्रविधि र निष्क्रिय सहभागिता समावेश हुनेछ।
जस्तै ईबर्डले प्रदर्शन गर्दछ, डेटा संग्रह वितरित वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका साथै, फोटोसिटीले नमूना र डेटा गुणस्तरसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न योग्य छन्। सामाजिक शोधको लागि कसरी डेटा संग्रह कार्य वितरित हुन सक्छ? एक उदाहरण सुसान वाटकिन्स र मलावी पत्रिकाहरु प्रोजेक्ट (Watkins and Swidler 2009; Kaler, Watkins, and Angotti 2015) उनको सहकर्मीहरूको कामबाट आउँछ। यस परियोजनामा ​​22 स्थानीय बासिन्दाहरू - "पत्रकारहरू" भनिन्छ "कुराकानीत्मक पत्रिकाहरू" भनिन्छ, विस्तारमा तिनीहरू साधारण व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनमा एड्सको बारेमा कुराकानी गर्दछन् (प्रोजेक्ट सुरु भएको बेला, लगभग 15% वयस्कहरू मलावीमा एचआईवी (Bello, Chipeta, and Aberle-Grasse 2006) संक्रमित भएका थिए)। तिनीहरूको अनौठो स्थितिको कारण, यी पत्रकारहरूले कुराकानी गर्न सकेनन् कि वाटकिन्स र उनको पश्चिमी अनुसन्धान सहयोगीहरूको लागि सम्भव नहुन सक्छ (म यस अध्यायमा पछिको नैतिकताबारे चर्चा गर्नेछु जब मैले तपाईंको आफ्नै ठूलो सहयोग परियोजना डिजाइन गर्ने बारेमा सल्लाह दिन्छु) । मलावी पत्रिकाहरूको परियोजनाले धेरै महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। उदाहरणका लागि, परियोजना सुरु गर्नु अघि, धेरै बाह्य व्यक्तिहरूले उप-सहारा अफ्रिकामा एड्स बारेमा मौन थियो भन्ने कुरामा विश्वास थियो, तर कुराकानीत्मक पत्रिकाहरूले प्रदर्शन गरे कि यो स्पष्ट रूपमा यो कुरा होइन: पत्रकारहरूले विषयको सैकड़ों चर्चामा राखेका छन्, स्थानहरूमा विविध रूपमा रौतहट, बारहरू र चर्चहरू। यसबाहेक, यी कुराकानीहरूको प्रकृतिले शोधकर्ताहरूले कन्डोम प्रयोगको केही प्रतिरोधलाई अझ राम्ररी बुझ्न मदत गरे; त्यो कि कन्डोम प्रयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सन्देशहरूमा फ्रेम गरिएको तरिकाले रोजगारीको जीवन (Tavory and Swidler 2009) मा छलफल गरिएको तरिकासँग असंगत थियो।
वास्तवमा, eBird बाट डेटा जस्तै, मलावी पत्रिका परियोजनाको डाटा एकदम सही छैन, वाटकिन्स र सहकर्मीहरूले विवरणमा छलफल गरे। उदाहरणका लागि, रेकर्ड गरिएका वार्तालापहरू सबै सम्भावित वार्तालापहरूको अनियमित नमूना होइन। बरु, तिनीहरू एड्स बारे कुराकानीको एक अपूर्ण जनगणना हो। डेटा गुणस्तरको सन्दर्भमा, शोधकर्ताहरूले उनीहरूको पत्रकारहरू उच्च-गुणस्तरका पत्रकारहरू थिए, जसको रूपमा पत्रिकाहरू र पत्रिकाहरूमा स्थिरताको कुरा हो। यही छ, किनकी पर्याप्त पत्रकारहरु एक सानो पर्याप्त सेटिङ मा तैनात गरियो र एक विशिष्ट विषय मा ध्यान केंद्रित गरे, यो डेटा को गुणवत्ता को मूल्यांकन र सुनिश्चित गर्न को लागि अनावश्यक उपयोग गर्न सम्भव थियो। उदाहरणका लागि, "स्टेला" नामक सेक्स सम्बन्धी कामदारले चार पटक विभिन्न पत्रकारहरू (Watkins and Swidler 2009) को पत्रिकाहरूमा धेरै पटक देखाए। तपाईंको इन्फुशन को निर्माण को लागि, तालिका 5.3 सामाजिक अनुसन्धान को लागि वितरित डेटा संग्रह को अन्य उदाहरणहरु लाई दर्शािन्छ।
तालिका 5.3: सामाजिक अनुसन्धानमा वितरित डेटा संग्रह परियोजनाहरूको उदाहरण
डेटा सङ्कलन गरियो
मलावी मा एचआईवी / एड्स को बारे मा चर्चा Watkins and Swidler (2009) ; Kaler, Watkins, and Angotti (2015)
सडकमा लन्डन Purdam (2014)
पूर्वी कांगोमा विवादास्पद घटनाहरू Windt and Humphreys (2016)
नाइजीरिया र लाइबेरियामा आर्थिक गतिविधि Blumenstock, Keleher, and Reisinger (2016)
इन्फ्लूएंजा निगरानी Noort et al. (2015)
यस खण्डमा वर्णन गरिएका सबै उदाहरणहरू सक्रिय सहभागिता समावेश छन्: पत्रकारहरूले यी कुरा सुनेको कुराकानीहरू; बर्डरहरूले आफ्नो बर्डिंग चेकलिस्टहरू अपलोड गरे; वा खेलाडीहरूले उनीहरूको तस्बिरहरू अपलोड गरे। तर के हो भने सहभागिता स्वचालित थियो र कुनै विशिष्ट कौशल वा समय पेश गर्न आवश्यक छैन? यो "सहभागी संवेदना" वा "जन-केन्द्र संवेदना" द्वारा प्रदान गरिएको प्रतिज्ञा हो। उदाहरणका लागि, एमथटका वैज्ञानिकहरूले Mothole Grol, एक परियोजना, बोस्टन क्षेत्रमा सात ट्याक्सी क्याबहरू भित्र जीपीएस-सुसज्जित accelerometers माउन्ट (Eriksson et al. 2008) । किनकी एक पोथेल मा ड्राइभिङ्ग एक विशिष्ट एक्सेलेटरमीटर सिग्नल छोड्छ, यिनी उपकरणों, जब टैक्सिस को भित्र राखयो, बोस्टन को पथोल नक्शाहरु लाई बनाउन सक्छ। निस्सन्देह, ट्याक्सीहरू अनियमित रूपमा नमूना सडकहरू छैनन्, तर, पर्याप्त ट्याक्सीहरू दिएका छन्, तिनीहरू शहरको ठूला अंशहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न पर्याप्त कवरेज हुन सक्छ। निष्क्रिय टेक्नोलोजीको दोस्रो फाइदा जुन प्रविधिमा निर्भर छ त्यो उनीहरूले योगदान गर्ने डेटाको प्रक्रियालाई कुशल बनाउँछ: जब यो कौशल इबर्डमा योगदान गर्न आवश्यक छ (किनकि तपाइँलाई पक्षी प्रजातिहरूको पहिचान गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ), यो कुनै विशेष कुञ्जीहरू आवश्यक छैन। पथोल ग्याँसमा योगदान।
अगाडी जाँदैछु, मलाई संदेह छ कि धेरै वितरित डेटा संग्रह परियोजनाहरू मोबाइल फोनको क्षमताहरू प्रयोग गर्न सुरु हुने छ जुन पहिले नै संसारभर अरबौं मानिसहरु द्वारा गरिन्छ। यी फोनहरूमा पहिल्यै मापदण्डको लागि धेरै ठूलो सेन्सरहरू छन्, जस्तै माइक्रोफोन, क्यामेरा, जीपीएस यन्त्रहरू, र घडीहरू। यसबाहेक, तिनीहरू तेस्रो-पक्षका अनुप्रयोगहरूलाई समर्थन गर्न सक्षम पार्छन् जुन शोधकर्ताहरूलाई अन्तर्निहित डाटा संग्रह प्रोटोकॉलमा केही नियन्त्रण गर्दछ। अन्तमा, तिनीहरूसँग इन्टरनेट-कनेक्टिविटी छ, यसको लागी उनीहरूलाई सम्भावित डेटा बन्द गर्न सम्भव बनाउँछ। गलत सेन्सर सीमित बैटरी ब्याट्रीमा धेरै टेक्निकल चुनौतीहरू छन्, तर यी समस्याहरूले सम्भवतः समयको तुलनामा टेक्नोलोजी विकासको रूपमा घटाउनेछ। गोपनीयता र नैतिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरू, अर्कोतर्फ, अझ जटिल हुन सक्छ; म तपाईंको आफ्नै ठूलो सहयोगको डिजाइन गर्ने बारे सल्लाह प्रदान गर्दा म नैतिकताको प्रश्नहरूमा फर्कनेछु।
वितरित डेटा संग्रह परियोजनाहरूमा स्वयंसेवकहरूले विश्वको बारेमा डेटा योगदान गर्छन्। यस दृष्टिकोणलाई पहिले नै सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ, र भविष्यका प्रयोगहरूले सम्भवतः नमूना र डेटा गुणस्तरका चिन्ताहरू समाधान गर्न पाउनेछ। सौभाग्य देखि, फोटोसिटी र पथोल गल्ती जस्ता अवस्थित परियोजनाहरूले यी समस्याहरूको समाधान गर्न सुझाव दिन्छ। किनकि अधिक परियोजनाहरूले टेक्नोलोजीको फाइदा उठाउँछन् जसले कुशल र निष्क्रिय सहभागीतालाई सक्षम बनाउँछ, वितरित डेटा संग्रह परियोजनाहरू मात्रामा नाटकीय ढंगले वृद्धि गर्नुपर्छ, शोधकर्ताहरू सक्षम गर्न डेटा सक्षम गर्न जुन अतीतमा मात्र सीमित थिए।